नेपालको उच्च शिक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
पुस ९, २०७७ रोशन पाण्डे, उमंग भट्टराई
नेपालमा कुल विद्यार्थीमध्ये, विगत पाँच वर्षको औसतमा, विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि भर्ना हुने ३ लाख ५०,००० माथि छन् । तीमध्ये करिब २० प्रतिशत उत्तीर्ण हुन्छन् र अझै उच्च शिक्षा लिने जम्मा २५,००० जना हाराहारी छन् ।
त्यसमा पनि विज्ञान–प्रविधि विषय लिने त झन् ५,००० जनाको हाराहारीमा मात्रै रहेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । त्यो भनेको हाम्रोजस्तो मध्यम आयस्रोत भएको अल्पविकसित देशमा निकै कम हो ।माध्यमिक विद्यालय शिक्षामा विगत दुई–तीन दशकमा व्यापक सुधार भएको देखिए पनि उच्च शिक्षा सन्तोषजनक मात्रै छ । उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने प्रवृत्ति तथा रोजगारीमूलक शिक्षाको कमी नै यसका मुख्य कारक हुन् । नेपाली विद्यार्थीमध्ये कतिपय उच्च शिक्षाकै लागि बिदेसिन्छन् भने कैयौंले त्यसैका नाममा रोजगारका लागि देश छोड्ने गर्छन् । हाल उच्च शिक्षा– जस्तै : स्नातकपछि–का लागि बिदेसिनेको चाप बढेको छ । त्यसमा पनि विरलैले आफ्नो पढाइ पूरा गरेको पाइन्छ । त्यस्तामध्ये अधिकांश त रोजगारीतिरै लागेका हुन्छन् ।
उच्च शिक्षाका लागि विदेश किन ?
विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि मौका तथा त्यससँगै आर्थिक रूपमा हुने फाइदा र भविष्यमा आफ्नो परिवारको सम्पन्नता जोडिएको हुन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयले दिने अनुदान, छात्रवृत्ति तथा सुविधा र विदेशको विकासको मोहमा रमाउने प्रवृत्ति यसमा मुख्य रहेको नकार्न सकिँदैन । नेपालमा दस वर्षमा कमाएजति रकम विदेशमा दुई–तीन वर्षको अध्ययन गर्दा अनुदान तथा अनुसन्धानमूलक अध्ययनबाट प्राप्त हुन्छ । अर्को कुरा, नेपालको पाठ्यक्रम पनि रोजगारदाताहरूको आवश्यकताअनुकूल छैन । कम तलबमा अनुभवी र दक्ष कामदार चाहिने यहाँको रोजगारी बजारले हालसालै विद्यावारिधि गरेको कर्मचारीको वृत्तिविकासमा खासै खर्च गर्न चाहँदैन, कामको परिणाम भने राम्रो चाहन्छ । यस्तैयस्तै कारणहरूले गर्दा धेरै विद्यार्थी नचाहँदा–नचाहँदै बिदेसिन पुग्छन् । पढाइ सकेर देश फर्कने सोच भएकाहरू पनि पढ्दाको आर्थिक भार, लोभलाग्दो विदेशी रोजगारी र परिवारको भविष्यको चिन्ताले फर्कने सोच त्याग्ने गर्छन् ।
नेपालको उच्च शिक्षा व्यवहारोपयोगी छ त ?
सम्पूर्ण उच्च शिक्षा–सम्भावित विद्यार्थीको चाहना विदेश गएर पढ्ने अथवा बाहिरको रमझमको स्वाद चाख्दै, कमाउँदै पढ्ने भन्ने हुँदैन । कतिपय विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा नसकिउन्जेल लगनशील भएर पढाइप्रति ध्यान दिने पनि छन् । तर त्यस्ता विद्यार्थीहरू जसले स्वदेशमै औपचारिक शिक्षा लिइरहेका छन्, उनीहरूले कतिसम्म व्यावहारिक ज्ञान अर्जन गर्न पाउँछन् त ? नेपालको सैद्धान्तिक पढाइको स्तर विकसित देशहरूका तुलनामा कम छैन । अझ भन्ने हो भने, विकसित कहलिएका राष्ट्रहरूको भन्दा राम्रो हुन सक्छ यहाँको पाठ्यक्रम । तर, प्रयोगात्मक ज्ञानमा अलि पिछडिएको छ । पाठ्यक्रममा प्रयोगात्मक विषयहरू नभएका हैनन् तर स्रोतसाधनको कमीले गर्दा ती विषयहरू पनि सैद्धान्तिकसरह पढाइने र जाँच पनि लिखित नै हुने परिपाटी कायमै छ । यसले गर्दा एउटा कुशल विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा सक्नेबित्तिकै रोजगारी बजारमा सजिलै मिश्रित हुन सक्दैन । अरू रोजगारीभन्दा विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोजगारीहरू एकदमै प्रयोगात्मक हुने हुनाले, काम सुरु हुनासाथ योजना बनाउने, कार्यसम्पादन गर्ने र निर्णय लिनेजस्ता गहन जिम्मेवारीहरू एउटा युवाकाँधमा आइपर्छन् । यस्ता जिम्मेवारीहरू वहन गर्न र निर्णय लिन पाठ्यक्रममा रहेका विषयहरूले निकै कम सहयोग गर्छन् । व्यावहारिक विषय र त्यसको अधिकतम प्रयोग विद्यार्थीकालमा हुन सके रोजगारीका क्रममा अवश्य पनि मद्दत हुन्छ ।
नेपालको उच्च शिक्षा तथा अध्ययन–अनुसन्धान
नेपालको उच्च शिक्षा सन्तोषजनक भए पनि शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, दुई दशकयता हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा उच्च शिक्षा तथा अध्ययन–अनुसन्धानमा व्यापक लगानी गरिएको छ, जसबाट उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा परिवर्तन आएको छ । यसले गर्दा त्यता उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने प्रवृत्तिमा ह्रास आउँदै गएको छ । नेपाली विद्यार्थीहरूमा स्वदेशी उच्च शिक्षाप्रति लगाव नहुनुमा महँगो शुल्कले पनि काम गरेको छ । रोजगारीमूलक नहुनु, विदेशमा हुने राज्यको अनुदान र सुविधासँग तुल्य नहुनु, अध्ययन–अनुसन्धानका लागि आधुनिक प्रयोगशालाको कमी हुनुले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ । रोजगारीमूलक, आर्थिक रूपमा प्रोत्साहित हुने खालको, देशको प्राथमिकतालाई माथि राखी दिगो विकास तथा स्थानीय औद्योगीकरणमा टेवा पुग्ने किसिमको उच्च शिक्षा नेपाललाई सुहाउँदो हुन्छ ।
उच्च शिक्षामा पनि प्राविधिक शिक्षाको त झनै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । कुनै पनि देशको विकास तथा उन्नति त्यहाँको विज्ञान–प्रविधिको समुन्नति र अनुसन्धानको स्तरमा भर पर्छ । विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको प्राथमिकताको विषय निर्क्योल गरी त्यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा जोड दिने गर्छन् । नेपालले पनि यो अभ्यास अनुसरण गर्नु जरुरी छ । ऊर्जाले भरिएका अनुसन्धानकर्मी युवालाई, स्वदेशमै केही योगदान दिन सक्ने समयमा, विदेश जान बाध्य पार्दा आफ्नै अहित हुन्छ । त्यस्तो अनुसन्धानकर्मी पछि फर्केर आए पनि उसको अधबैंसे अनुभवबाट देशलाई त्यति फाइदा हुँदैन जति ऊर्जाशील युवा उमेरमा दिन सक्छ । देश विकासको मूल आधार भनेकै युवाहरू हुन् । त्यसमा पनि विज्ञान–प्रविधिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरू । देशको भविष्य निर्धारण गर्ने यो पुस्ताका लागि देशभित्रै अध्ययन–अध्यापनको अवसर उपलब्ध गराउन सके विकासले गति लिन सक्छ । प्राथमिकतामा आधारित स्वदेशी उच्च शिक्षाले आजको व्यक्तिगत आर्थिक उपलब्धि तथा सम्पन्नताभन्दा भोलिको देशको आर्थिक विकास र देशको सम्पन्नताको निर्धारण गर्नेछ । हामी युवाहरूले पनि आफ्नो देशको प्राथमिकताको विषय र भोलिको सम्भावनालाई केलाउँदै यहीँ विदेशी अनुसन्धानको अनुकरण गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि व्यवहारोपयोगी शिक्षा, उचित छात्रवृत्ति, सस्तोमा विद्यार्थी ऋण र रोजगारीको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो ।
(पाण्डे र भट्टराई इन्जिनियर हुन् ।)
प्रकाशित : पुस ९, २०७७ ०८:१३
आध्यात्मिक बन्न आफ्ना जिम्मेवारी छाड्नुपर्दैन, न त कुनै ठूलो पहाड नै फुटाउनुपर्छ ।
पुस ९, २०७७ लीना दुवाडी
म आफू हिन्दु भएकामा गर्व गर्छु, तर दुःखद नै भनौं, मैले आजसम्म यथार्थ रीतले पूजाआजा गरेकी छैन । चाडपर्वमा हुने धार्मिक गतिविधिमा सहभागी हुन्छु । तर मलाई कुन भगवान‌्को पूजा कसरी र कहिले गर्ने, खासै जानकारी छैन । मानिसहरूले नित्यकर्मजस्तै दैनिक पूजाआजा गरेको पनि देख्छु । तर न मलाई त्यस्तो नित्य पूजाआजाको विधि थाहा छ, न त मैले त्यसबारे कहिल्यै सिक्ने कोसिस नै गरें । कैयौं मन्दिर भ्रमण गर्दा मैले पूजा गरिनँ, तर देवीदेवताका ती निर्जीव मूर्तिप्रति सम्मान व्यक्त गरेकी छु । उनीहरूको सम्मानमा जम्मा हुने सयौं मान्छेको भावनाको कदर गर्दै स्वानुभूतिमा रमाएकी छु ।
यस हिसाबले हेर्दा सामाजिक परिभाषामा म पक्कै पनि धार्मिक देखिन्नँ होला । यद्यपि म आफूलाई पूर्ण रूपमा आध्यात्मिक र धार्मिक मान्छु, किनकि म विज्ञानमा विश्वास गर्छु । सायद तपाईंलाई अनौठो लाग्यो, ‘अध्यात्ममा रुचि राख्ने, पूजाआजा नगर्ने, व्रत नबस्ने तर आफूलाई आध्यात्मिक र धार्मिक भन्ने अनि विज्ञानमा विश्वास गर्ने भएर आध्यात्मिक र धार्मिक हुँ भन्ने । यो कसरी सम्भव छ ?’
सानैमा आध्यात्मिक जीवनशैलीसँग परिचित हुन पुगें म । मैले ज्ञान र ध्यानबारे सिक्न सुरु गरेकी हुँ, दस वर्षकै उमेरदेखि । त्यस बेलाको कलिलो दिमागले कमै बुझे पनि मभित्र अध्यात्मको बीउ पसिसकेको थियो । पछि दुई वर्ष मैले विज्ञान र अध्यात्मको समर्पित विद्यार्थी भएर बिताएँ । एकसाथ दुई अलग धारको पढाइका कारण पनि मलाई कहिल्यै अध्यात्म र विज्ञान एकअर्काका परिपूरक होइनन् जस्तो लागेन । मेरो अनुभवमा धर्म, विज्ञान र अध्यात्मको तालमेलबारेको तथ्य स्विकार्न नसक्नु नै आस्तिक र नास्तिकका रूपमा सामाजिक विभाजनको एउटा मुख्य कारण हो ।
करिअर सुरु गर्नुपूर्वका दुई वर्ष म साध्वीजस्तै थिएँ । बिहान तीन बजे उठेर ध्यानमा बस्नु, नित्यकर्मसँगै ईश्वरीय ज्ञान सुन्नु, दिउँसो अध्ययन गर्नु, साँझ फेरि ध्यानमा सहभागी हुनु, सात्त्विक भोजन मात्रै गर्नु मेरो दिनचर्या थियो । त्यो म आफैंले रोजेको बाटो थियो । अध्यात्मले मलाई कुनै पनि सिद्धान्तलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सिकाएन । नियमानुसार मैले अध्यात्मका नीतिहरूलाई प्रयोग गरेर हेरें । जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आएको पाएरै म यस मार्गमा अघि बढें । धर्मले ज्ञान दिन्छ, सही र गलतको परख गर्न सिकाइदिन्छ । अध्यात्मले धर्मलाई सही तरिकाले अपनाउन सिकाउँछ । यसलाई नै ‘आर्ट अफ लिभिङ’ अर्थात् जीवन जिउने कला भनिन्छ ।
विज्ञानको विद्यार्थी भएर पनि होला, मैले अध्यात्मलाई प्रयोगात्मक अनुसन्धानको तरिकाले अपनाएँ । ‘विज्ञान’ को शाब्दिक अर्थ यो पनि भनिएको छ– ‘कुनै एउटा विशिष्ट विषयमा गरिएको व्यवस्थित बुझाइ ।’ यसको मतलब विज्ञानको अर्थ प्रविधि र यसले छोएका पक्षहरूबाट अझ फराकिलो छ । मेरो बुझाइमा धर्म, अध्यात्म र विज्ञानका सिद्धान्तमा त्यति धेरै भिन्नता छैन । फरक यत्ति हो– विज्ञानले बाह्य जगत्‌को अध्ययन गर्छ, धर्म र अध्यात्मले आन्तरिक जगत्‌को।
‘तिमी यो उमेरमै धर्मकर्ममा लागेर किन बिग्रिएकी ?’ एकपटक एक काकाले भनेका थिए । धर्मकर्म, अध्यात्म, समाजसेवा अवकाश जीवन बिताउने माध्यम हो भन्ने हामी ठान्छौं । धर्म र अध्यात्मको प्रयोग त त्यति बेला धेरै हुन्छ, जति बेला हामी जीवनको सबैभन्दा व्यस्त समयमा हुन्छौं । जसरी भौतिकवादले हाम्रो जीवनलाई बाहिरी रूपमा सहज बनाइदिएको छ, त्यसरी नै धर्म र अध्यात्मले जीवनलाई आन्तरिक रूपमा सहज बनाउने गर्छ ।
बाह्य र आन्तरिक जीवनको सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा वा गर्न नखोज्दा हामी अहिले पर्याप्त स्रोत, साधन, जानकारी हुँदाहुँदै पनि दुःखी छौं । हामीले आफू आधुनिक विश्वको मानव हुनुमा गर्व त गर्‍यौं, तर विज्ञानका महान् हस्ती आइन्स्टाइनको ‘धर्मबिना विज्ञानको दृष्टि रहन्न र विज्ञानबिना धर्म सग्लो रहँदैन’ भन्ने भनाइलाई सही अर्थमा बुझ्ने प्रयाससम्म गरेनौं । समाजमा व्याप्त कैयौं गलत विश्वास प्रणाली (बिलिफ सिस्टम) का कारण हामीमध्ये धेरै जना धर्म भनेको अव्यावहारिक र अनावश्यक हो भन्ने ठान्छौं । संसारका सबै धार्मिक मान्यताहरू मानवहितकै लागि बनेका हुन् । तर शक्तिको द्वन्द्वले अहिले विभिन्न धर्मका मानिसबीच ठूलो दूरी पैदा गरिदिँदा धर्म संसारमा एउटा समस्याका रूपमा देखा परेको छ । रचनात्मक हिसाबले प्रयोग गर्ने हो भने अध्यात्म विज्ञान र धर्मबीचको सुन्दर साँघु हो ।
एउटा रोचक प्रसंग छ, विश्वचर्चित आध्यात्मिक कोच सिस्टर शिवानीसँगको । उनलाई एक सफल व्यवसायीले सोधेका थिए, ‘सिस्टर, म सांसारिक जीवनदेखि आजित भइसकें । अब म यो सबै छोडेर ज्ञान र ध्यानमा लाग्न चाहन्छु ।’ सिस्टरले सोधिन्, ‘आध्यात्मिक जीवनशैली अपनाउन परिवार, कारोबार किन छोड्नुपर्‍यो र ?’ ती व्यवसायीले भने, ‘अब म यो व्यापारको टेन्सनमा लाग्न चाहन्नँ । मलाई पुग्यो अब ।’
सिस्टरले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘अध्यात्ममा लागेर के गर्नुहुन्छ नि ?’
ती व्यवसायीले जवाफ फर्काए, ‘ज्ञान र ध्यान गर्छु ।’
प्रश्न फेरि थपियो, ‘ज्ञान र ध्यान दिनमा कति बेर, अनि कति दिन ?’
व्यापारी आश्चर्यमा परे र सोधे, ‘अनि, कसरी लाग्ने त अध्यात्ममा ?’
सिस्टर शिवानीले भनिन्, ’तपाईंले गरिरहनुभएको काम, पारिवारिक जिम्मेवारी सबै पूरा गर्नुस् । व्यापार दस सहरमा फैलिएको छ भने बीस सहरमा विस्तार गर्नुस् । तर तपाईंले गर्ने हरेक काम मानवीय मूल्यको आधारमा हुनुपर्छ । तपाईंको कारोबार इमानदारी र नैतिकताको बलमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
व्यापारीले भने, ‘यो त सम्भव छैन ।’
सिस्टरले भनिन्, ‘त्यसो भए अध्यात्मले काम गर्दैन ।’
आध्यात्मिक बन्न आफ्ना जिम्मेवारी छाड्नुपर्दैन, न त कुनै ठूलो पहाड नै फुटाउनुपर्छ । जसरी शारीरिक स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीका लागि स्वस्थ आहार र व्यायामको आवश्यकता पर्छ, त्यसरी नै मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यका लागि आध्यात्मिक पोषणको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि दैनिक आधा घण्टा पर्याप्त छ । बढ्दो मानसिक तनाव र अस्थिरताका बीच सन् १९७९ मा अमेरिकी प्रोफेसर जोन कबाटले ध्यानमा आधारित तनाव व्यवस्थापन पद्धतिको सुरुआत गरे । अहिले संसारभरि ‘माइन्डफुलनेस’ अर्थात् ध्यान शारीरिक र मानसिक दुवै उपचारमा प्रभावकारी साबित भएको छ । माइन्डफुलनेस मेडिटेसनले आत्माको आन्तरिक शक्तिलाई जागृत अवस्थामा राख्छ । मानव आत्मामा निहित अथाह ऊर्जालाई व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग गर्न सिकाउँछ । यो नै आध्यात्मिक जीवनशैली हो ।
पछिल्लो समय ध्यान लोकप्रिय भएसँगै अहिले यसप्रति आम मानिसको चासो बढेको छ । इन्टरनेटमा हजारौं व्यक्तिले मोटिभेसन स्पिकर र लाइफ कोचका रूपमा तनावमुक्त जीवनशैली सिकाइरहेका छन् । यो पनि अध्यात्मकै पाटो हो । अध्यात्म कुनै छुट्टै ग्रहबाट आएको सिद्धान्त होइन । यो हरेक मानिसभित्र रहेको मानवीय गुण र मूल्यको अनुबोध हो । ध्यान भनेको कुनै आसनमा बसी आँखा बन्द गरेर गरिने क्रिया मात्र होइन, ध्यान अर्थात् अटेन्सन । आफूले गर्ने हरेक कार्यलाई माइन्डफुल भएर गर्नु नै ध्यान हो । ध्यान अर्थात् अध्यात्म अपनाउनेबित्तिकै जीवन रातारात परिवर्तन हुने होइन । यसका लागि निरन्तर अभ्यास आवश्यक छ । चौबीस घण्टामा केही मिनेट मात्र भए पनि हामीले आध्यात्मिक अभ्यासलाई प्रयोग गर्न सक्यौं भने त्यसले ‘मेन्टल इम्युनिटी’ अर्थात् मानसिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन ठूलो मद्दत गर्छ ।
प्रकाशित : पुस ९, २०७७ ०८:१२